Chii Chinonzi Tet: Chirongwa cheNyika Itsva yeVietnamese
Chii Chinonzi Tet?
Kutanga kuNyika Itsva yeVietnamese
Apo vazhinji veAmerica vanonzwa shoko rokuti "Tet," vanoyeuka pakarepo kudzidza nezve 1968 Tet Inonyadzisa panguva yeHondo yeVietnam. Asi chii chiri Tet?
Chimbofungidzirwa zuva rokutanga rechitsime uye rinokosha kupfuura mamwe mazororo enyika munyika yeVietnam, Tet ndiyo mhemberero yegore negore yeVietnamen yeChishanu, ichienderana neNyika Itsva yeLunar inopembererwa munyika yose munaJanuary kana February.
Zvechokwadi, "Tet" inopfupiswa (thank goodness!) Maitiro eTết Nguyên Đán, nzira yokutaura "Gore Idzva Lunar" muVietnam.
Kunyange zvazvo Tet inogona kunge iri nguva inofadza yekufamba muVietnam , inguva yakaoma nguva yegore yekuvepo . Mamiriyoni evanhu achange achifamba nomunyika kuti ayananezve neshamwari nemhuri. Iko hovha ichava nechinokonzera kurwendo rwako.
Tet inoonekwa semukana wekutanga kutanga. Zvikwereti zvakagadziriswa, zvikwereti zvekare zvinokanganwirwa, uye dzimba dzinoshambidzwa ne-clutter - zvose kuisa danho rekukwevera mari yakawanda uye mari yakawanda sezvinogona mugore rinouya.
Zvaunotarisira MuNyika Itsva yeVietnam
Nokuti zvikafu zvakawanda uye mabhizinesi achavharwa munguva chaiyo yeTet holiday, vanhu vanomhanya mumavhiki vasati vatarisira kugadzirira. Vanotenga zvipo, zvokudya, uye zvipfeko zvitsva. Zvokudya zvakawanda zvinoda kugadzirirwa kumhuri dzezvemhuri. Misika uye nzvimbo dzekutenga dzinova busier uye busier. Hotels vanobviswa.
Nharaunda dzinowanzowedzera kufanana nekubuda panguva yeTet.
Midzimu inomuka, uye mhepo inova netariro. Pfungwa huru inowanikwa pakukwanisa kukoka mari yakawanda mumisha nemabhizimisi mugore rinotevera. Chinhu chipi nechipi chinoitika musi wekutanga wegore idzva chinofungidzirwa kuti chigadzirire kufamba kwegore rose. Mashura anowedzera!
Kune vanofamba muVietnam, Tet inogona kuratidzika se inoshamisa zvikuru inofadza uye yakaipa sezvo vanhu vachipemberera mumigwagwa nekukandira moto uye kupopotera-kana zvimwe zvinhu zvinotyisa - kutya mweya yakaipa inogona kuunza urombo hwakaipa.
Imwe makamuri ehotera ane mahwindo akatarisana nemugwagwa achange ari mhere-mhere panguva yekupemberera.
Tet inguva yakaisvonaka yekuona tsika dzeVietnam, mitambo, uye mheremhere. Zvikamu zvepakati pevanhu zvakasimwa munyika yose nemahara emitambo yemitambo, mimhanzi, uye varaidzo. Munharaunda yakakurumbira yePham Ngu Lao kuSaigon, maitiro anokosha achaitirwa vashanyi. Zvakawanda segore reNyika Itsva yeChinese, kuchava nedhikanoni mitambo uye shumba inotamba .
Kufamba Panguva YeTet
Vanhu vakawanda veVietnam vakadzokera kumisha yavo yemisha nemhuri munguva yeTet; hufambisi hunozadzwa mumazuva asati apfuura uye mushure mezororo. Ronga nguva yakawedzerwa kana iwe uchange uri kuda kutenderera nyika.
Mabhizimisi akawanda anoswedera mukuchengetedza zuva rezororo, uye dzimwe nzvimbo dzinononoka nevashoma vashandi varipo.
Mhuri dzakawanda dzeVietnam dzinotora mukana wezororo renyika kuburikidza nekufamba kunzvimbo dzevashanyi kunopemberera uye kunakidzwa nenguva kubva kubasa. Inzvimbo dzakakwikwidza mabhandi nemataundi ekushanyira akadai saHoi An achava busier nevamwe vanoona kupfuura nguva dzose. Bhuku rinotevera: mahofisi mashomanana achawanika uye mitengo yekugara inowedzera zvakanyanya nechishuwo munzvimbo dzakakona.
Kunyange zvazvo gore reChinese reChinese richicherechedzwa kwemazuva gumi , Tet inowanzopemberera kwemazuva matatu nedzimwe tsika dzakachengetwa kwevhiki.
Zuva rokutanga reTet rinowanzopedzwa nemhuri yepedyo, zuva rechipiri nderokushanyira shamwari, uye zuva rechitatu rakatsaurirwa kuvadzidzisi nekushanyira temberi.
Nemhaka yokuti chinangwa chinangwa ndechekukwezva ruzivo rukuru rwegore idzva, Tet neChinese gore Idzva vanogovera tsika dzakafanana dzakafanana. Somuenzaniso, haufaniri kupera panguva yeTet nokuti iwe unogona kuparadza ruzivo rutsva. Izvo zvinoenda kune chero kucheka: usagunzva vhudzi rako kana zvigunwe munguva yezororo!
Chimwe chetsika dzakakosha dzakaonekwa panguva yeTet ndiko kusimbiswa kwekuti ndiani ndiye wokutanga kupinda mumba mugore idzva. Munhu wekutanga anounza rombo (zvakanaka kana rakaipa) kwegore! Musoro weimba - kana mumwe munhu akafunga kuti akabudirira - mashizha uye anodzoka maminitsi mashomanana mushure meusiku husiku kuti ave nechokwadi chokuti ivo ndivo vokutanga kupinda.
Nzira Yokutaura Nhefenyu Idzva Inofadza muVietnam
Kufanana neThai neChinese , Vietnamese ndiyo mutauro unonyanya kushandiswa, zvichiita kududzira kunopesana nevatauri veChirungu.
Pasinei, vagari vemo vachanzwisisa kuedza kwenyu kuburikidza nemugariro. Iwe unogona kufarira vanhu gore idzva rinofadza muVietnam nekuvataurira "chúc mừng năm mới." Zvinoshandurwa zvakanyanya sezvinoshandurwa, kukwazisa kunonzwika se "chook moong nahm moi."
Kufanana nemazororo akawanda echando muAsia , Tet yakabva kune kendendeni yeChinese lunisolar. Zuva racho rinochinja gore negore reLunar New Year, asi kazhinji rinowira pakupera kwaJanuary kana kutanga kwaFebruary.
Zuva rokutanga remwedzi mutsva rinoitika pamwedzi mutsva pakati paJanuary 21 neFebruary 20. Hanoi iawa imwe iri shure kweBeijing, saka mamwe makore kutanga kweTet kunopararira kubva mugore reChinese reChinese nerimwe zuva rimwe chete. Kana zvisina kudaro, unogona kungofunga kuti mazororo maviri anoenderana.
Dates for Tet muVietnam:
Nyorera kuNoi Bai International Airport, Hanoi, Vietnam
Vietnam Travel Information - Mashoko Akakosha kuMushanyi Wokutanga-Nguva
Nzira Yokusvika kuMui Ne Sand Dunes
A Mutungamiri weHue kuCentral Vietnam
Mazano Emari Kune Vafambi muVietnam
Zvinhu Zvokuita Nevana muCorpus Christi
Slugging in Washington DC: Sluglines, Instant Carpooling
Mepu yeFrench Riviera (Cote d'Azur)
Top 10 Washington, DC Gay neLesbian Bars neClub
Zvinhu Zviripo muCopenhagen
Maawa 48 muBrooklyn: Inzira Yakakwana
Chiitiko Chishamiso cheRossnowlagh Orange Order Parade
Best of Cajun Country With Kids
Iwe Unoda Pasipoti Kuti Uende kuUSVI (US Virgin Islands) here?
Nzira Yokuronga Nayo Yakakosha Nayo Safari
US Embassy muLondon